Farqiga ugu Weyn ee udhaxeeya Enanthate Test iyo Propionate Test
Halkan waxaan ku xallin doonaa labadaba Testosterone Propionate (CAS 57-85-2) iyo Testosterone Enanthate (CAS 315-37-7). Maqaalkani wuxuu furi doonaa maskaxdaada wuxuuna kaa caawinayaa isbarbardhigga faa'iidooyinka imtixaanka ee Testosterone Enanthate iyo faa'iidooyinka tijaabada ee Testosterone Propionate. Sidoo kale, haddii aad xiiseyneyso inaad aqriso imtixaanka dhabta ah ee imtixaanka dhabta ah ee imtixaanka dhabta ah, markaa taasi waa meesha ay tahay. Looma baahna inaad sameysid tijaabo iyo habka qaladka inta aad rabto inaad iibsato Testosterone En ...
Sustanon 250 isticmaalaa, Cycle, Qiyaasta, Faa'iidooyinka, Reviews
Wax walba oo ku saabsan Sustanon 250 1.What waa Sustanon 250? 2. Sustanon 250 Waxay isticmaashaa 3.Sustanon 250 Qeybta 4.Sustanon 250 Saynis 5.Sustanon Natiijooyinka 250 6.Sustanon 250 Xanuun 7 250.Sustanon 8 faa'iidooyinka 250.Sustanon 9 dib u eegis 250.Sustanon 10 iibinta 1.Sustanon ee xoojinta jirka jirka-250. Waa maxay Sustanon 250? Sustanon XNUMX waa mid ka mid ah steroids aad u caan ah oo wi ...
Ultimate Hagaha Stanozolol (Winstrol) ee Bodybuilding
Wax walba oo ku saabsan Stanozolol 1.What (Winstrol) waa Stanozolol? 2. Sidee buu u shaqeeyaa Stanozolol? 3.Stanozolol isticmaalaa 4.Stanozolol qiyaasta 5.How in ay qaataan Stanozolol 6. Yaanay qaadanin Stanozolol? 7.Stanozolol wareega 8.Stanozolol 9.Stanozolol Nafaqada 10.Stanozolol 11.Stanozolol dib u eegis 12.Stanozolol iibinta 13.Stanozolol ee jirka dhismaha - (kooban) ...